ဓာတ်ပုံဆရာများသို့…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » ဓာတ်ပုံဆရာများသို့….	4
Posted by kai on Jul 6, 2016 in Editor's Notes, Know-How, DIY, Myanmar Gazette |4comments
ပုံနှိပ်သတင်းစာမှာ လစဉ်ပုံမှန်ပါနေတဲ့ အတိုင်း.. Photo Essay ဘယ်သူလုပ်ပေးနိုင်လည်း သိချင်လို့ပါ…။
ရွာသူားဓာတ်ဆြာများထဲက ဦးစားပေးပေါ့..။ တလတခါမို့.. အချင်းချင်းညှိပြီး တလှည့်စီရေးပေးမယ်ဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စာကတော့ သိပ်မလို.. ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့.. ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ”အချက်အလက်”တချို့သာလိုပါတယ်။
လုပ်ပေးနိုင်တဲ့.. တခြား ဓာတ်ပုံဆရာအသိတွေထဲကရှိရင်လည်း မိတ်ဆက်ပေးစေလိုပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ဘစ်ဇနက်ရှိရင် ကြော်ငြာအနေနဲ့ အက်ဆေးနောက်ဆုံးမှာ မိတ်ဆက် အီးမေးလ်ထည့်ပေးပါမယ်။
အမေရိကားက မြန်မာပြည်ကို Photo Tourism သွားချင်သူတွေကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ကားငှား.. လူတွေကိုရင်တွေကို.. Setup လုပ်ပြီးရင်.. မြန်မာပြည်အနှံ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခရီးထွက်ကြရင်း.. ဘစ်ဇနက်လုပ်နိုင်သပေါ့…။
အပိုဆုအနေနဲ့.. အမေရိကားကို Photo Tours လာချင်သူများရှိရင်လည်းပြောပါ။
လောလောဆယ်တော့.. ၇ရက်နေ့ကစလို့.. မိုင်.. ၃ထောင်ခရီး.. ပြည်နယ်၉ခုကိုပါတ်ထွက်ပါမယ်..။
kai says: ကြည့် … တယောက်မှတောင်ပေါ်မလာသေးဘူး..
မမချွိ says: အပြင်ကတစ်ယောက်ကို တဂျီးဆီ ဆက်သွယ်ခိုင်းထားတယ်ကော။
Thint Aye Yeik says: လူပုံချည်း (ချောချောလှလှ ယောကျာ်းပုံချည်း) ရိုက်ပြီး..ဘယ်လိုချောမောလှပကြောင်း အက်ဆေးရေးချင်သူရှိရင်…လက်တို့လိုက်ပါအုန်း။
အောင် မိုးသူ says: တားတို့က ဓာတ်ပှုံဆြာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့